BOOM Coin စျေး - အွန်လိုင်း BOOM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BOOM Coin (BOOM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BOOM Coin (BOOM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BOOM Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BOOM – BOOM Coin
Market ကဦးထုပ်: $1 066 310.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BOOM Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BOOM Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BOOM CoinBOOM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00162BOOM CoinBOOM သို့ ယူရိုEUR€0.00137BOOM CoinBOOM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00124BOOM CoinBOOM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00147BOOM CoinBOOM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0144BOOM CoinBOOM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0102BOOM CoinBOOM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0356BOOM CoinBOOM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.006BOOM CoinBOOM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00215BOOM CoinBOOM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00225BOOM CoinBOOM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0356BOOM CoinBOOM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0125BOOM CoinBOOM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00877BOOM CoinBOOM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.121BOOM CoinBOOM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.273BOOM CoinBOOM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00222BOOM CoinBOOM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00247BOOM CoinBOOM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0503BOOM CoinBOOM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0112BOOM CoinBOOM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.172BOOM CoinBOOM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.92BOOM CoinBOOM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.624BOOM CoinBOOM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.118BOOM CoinBOOM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0442
BOOM CoinBOOM သို့ BitcoinBTC0.0000001 BOOM CoinBOOM သို့ EthereumETH0.000004 BOOM CoinBOOM သို့ LitecoinLTC0.00003 BOOM CoinBOOM သို့ DigitalCashDASH0.00002 BOOM CoinBOOM သို့ MoneroXMR0.00002 BOOM CoinBOOM သို့ NxtNXT0.126 BOOM CoinBOOM သို့ Ethereum ClassicETC0.000238 BOOM CoinBOOM သို့ DogecoinDOGE0.467 BOOM CoinBOOM သို့ ZCashZEC0.00002 BOOM CoinBOOM သို့ BitsharesBTS0.0498 BOOM CoinBOOM သို့ DigiByteDGB0.0517 BOOM CoinBOOM သို့ RippleXRP0.00574 BOOM CoinBOOM သို့ BitcoinDarkBTCD0.00006 BOOM CoinBOOM သို့ PeerCoinPPC0.00536 BOOM CoinBOOM သို့ CraigsCoinCRAIG0.737 BOOM CoinBOOM သို့ BitstakeXBS0.069 BOOM CoinBOOM သို့ PayCoinXPY0.0282 BOOM CoinBOOM သို့ ProsperCoinPRC0.203 BOOM CoinBOOM သို့ YbCoinYBC0.0000009 BOOM CoinBOOM သို့ DarkKushDANK0.519 BOOM CoinBOOM သို့ GiveCoinGIVE3.5 BOOM CoinBOOM သို့ KoboCoinKOBO0.368 BOOM CoinBOOM သို့ DarkTokenDT0.00149 BOOM CoinBOOM သို့ CETUS CoinCETI4.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 15 Aug 2020 20:30:02 +0000.